Ajinebiga ku cusub Norwey | Samfunnskunnskap.no
Dadka ajinebiga ah ee doonaya iney degaan Norwey waa iney heystaan sababo sharciga waafaqsan si loo siiyo ogolaansho joogitaan. Nooca ogolaansho ee qofku heystaa waxey siineysaa xuquuq iyo waajibaadyo kala duwan. Qof walba waa inuu ogaadaa sharciga khuseeya ogolaanshihiisha.
Qof kasta oo ku nool Norway isaga ayey waajib ku tahey inuu wax ka ogaado, sharciyada iyo qawaaniinta wadanka. Sidoo kale qofka waxaa ku waajib ah inuu sheego warbixin sax ah marka qof dawladda u shaqeeyaa ka codsado.
Dhammaan dadka degan Norway waxay leeyihiin xaquuq iyo waajibaad
Taa macnaheeda waa dhammaan caruurta oo dhan waxay xaq u leeyihiin inay iskuul helaan, dadka oo dhanna waxey xaq u leeyihiin iney helaan daryeel caafimaad. Qof kasta oo shaqeeya waxaa ku waajib noqonaya inuu canshuur bixiyo. Markii aad buuxinayso warqadda xisaabxirka sanadkii waxaa kugu waajib ah inaad warbixin sax ah ku qortaa.
Habka maamulku wuxuu ku dhisan yahay is aamin
Maamulka wadanku wuxuu ku kalsoon yahay dadweynaha ineey wax sax ah sheegaa, sharciga raacaan. Habka maamulka Norway wuxuu ku dhisan yahay mab’aadi (caqiido). Inkasteey jiraan habkontorool, waxaana mararka qaarkood la sameeyaa baaritaan tijaabo ah. Qofkii lagu qabto inuu qiyaamo habkan, waxaa lagu qaadi doonaa sharciga. Waxayna noqonkartaa ganaax, xabsi, in lagu xukumo inuu bulshada mushaar la`aan ugu shaqeeyo muddada lagu xukumay. Iwm.
Siyaabo kala duwan oo Norway lagu joogo karo
Waxbarashada af-noorwiijiga iyo cilmiga bulshada.
Barnaamijka Barashada Hab-nololeedka Norway
Adeegyo kala duwan oo ajinebigu u baahnaan karaan
ka qayb-qaadashada arimaha shaqada iyo Bulshada
Taariikh, Juquraafi iyo Cilmiga Bulshada
Taariikhda Norway oo kooban
Caadooyinka iyo waqtiga wax la xuso
Diimaha iyo waxyaalaha kale dadka aaminsan yihiin
Caruurnimo, sharciga daryeelka caruurta iyo hayadda badbaadinta carruurta
Waxbarashada iyo Dugsiyada
Guryo kala gedisan
Xaquuqda iyo waajibaadka labada is-guursanaya
Tariikhdii horumarka Nolosha wadanka
Kaalmooyin kala gedisan
Caruurta iyo caafimaadka
Ka hortagga cudurada
waxbarasho iyo xirfad
Habka warbarashada Noorway
Xarunta xanaanada caruurtu waa hab waxbarasho.
Dhaqanka saldhiga iskuulka
Wada shaqeynta guriga iyo iskuulka
Waxbarashada dugsiga sare
Shaqada iyo Daryeelka
Tariikhdii horumarka shaqada
Xaquuqda iyo waajibaadka shaqooyinka
Ururada shaqaalaha iyo ka qeybgalista
Dadka oo dhan oo shaqeeya!
Daryeelka bulshadu wuxuu abuuraa shaqooyin
Mushaar iyo canshuur
Shaqada suuqa madow
Dimuquraadiyad iyo Daryeelka bulshada
Xuquuqda iyo xuriyadda dimuquraadiyadda
Dawladda, maamulka gobalka iyo degmooyinka
Barlamaanka iyo dawladda
Doorashada iyo xisbiyada siyaasadaha
Noorway waxay ka tirsan tahay ururada caalamiga ah
Shaqada u weyn ee bulshada daryeelka
Xafiiska shaqada iyo cayrta (NAV)
Doonitaanka bixinta lacagaha
Xuquuqda iyo waajibaadka habka daryeelka bulshada